Chinabọchị iri na abụọ nke International China Fatịlaịza Exhibition abịawo na njedebe na-aga nke ọma.
site ha na 2021-06-25
Chinabọchị iri na abụọ nke International China Fatịlaịza Exhibition abịawo na njedebe na-aga nke ọma. Daalụ maka ọbịbịa gị! Mgbe afọ iri na otu mmepe, FSHOW Fatịlaịza Ngosipụta aghọwo ihe ngosipụta kachasị ukwuu nke China International Agrochemicals and Plant Protection Exhibition (CAC). Z ...
China International New Fatịlaịza Ngosi (FSHOW)
site ha na 2021-05-28
YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd. ga-egosipụta FSHOW2021 site na June 22 ruo 24, 2021 na Shanghai New International Expo Center. China International New Fatịlaịza Ngosi (FSHOW), aghọwo n'ime fatịlaịza ubi kasị ukwuu 'kasị mma okwu ọnụ' otu n'ime ndị kasị sie m ...
Ihe ngosi 22 International China Agrochemical & Crop Protection Exhibition
site ha na 2021-04-28
FSHOW2021 ga-eme na Shanghai New International Expo Center site na June 22-24, 2021. N'oge ahụ, Zhengzhou Yizheng Heavy Industry Machinery Co., Ltd. ga-esonye na ngosi ahụ iji kwalite mgbanwe ụlọ ọrụ na mmekọrịta azụmahịa. Anyị na-anabata ọhụụ na ọhụụ ọhụụ niile na-aga ije ...
Ekwesiri ị pointsa ntị na isi ihe ndị a n'oge usoro nsị anụ atụrụ
site ha na 2020-09-21
Ngwakọta nke akụrụngwa: nha nke atụrụ na nri na ihe inyeaka kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 10mm, ma ọ bụghị ya, a ga-echi ya ọnụ n'ala. Mmiri mmiri kwesịrị ekwesị: ezigbo iru mmiri nke composting microorganism bụ 50 ~ 60%, oke iru mmiri bụ 60 ~ 65%, mmiri ahụ bụ adju ...
Gịnị kwesịrị ị paya ntị na mmezi ezi nri organic fatịlaịza mmepụta akara?
Ezi nri nri na-achọ ọrụ mmezi oge niile, anyị na-enye nkọwa zuru ezu ị chọrọ ndetu: debe ebe ọrụ dị ọcha, oge ọ bụla mgbe ị jiri akụrụngwa fatịlaịza na-arụ ọrụ kwesịrị iwepu akwụkwọ granulation na ájá ájá n'ime na n'èzí nke ihe nkedo, ...
Otu esi eme ka ihe mkpofu nke fatịlaịza fatịlaịza belata
Ihe mkpofu ahịhịa nke akụrụngwa fatịlaịza na-eji eme ihe bụ nke ihe na-emebi emebi, n'ihi ya, anyị ga-eji gwongworo mechiri emechi iji kpokọta ma bupu ihe mkpofu ahụ. Ihe mkpofu ahihia ndia di nfe inye oku uto, nke n’enyeghi oghom na gburugburu ebe obibi, kama o na eme oke ihe ojoo ...
Zhengzhou Satu Zheng Arọ Technology Machinery Co, Ltd 2018 Rapat Ringkasan Tahunan
Zhengzhou Yizheng arọ ulo oru ígwè co., LTD. Emere nzukọ nzukọ afọ 2018 nke gara nke ọma na ọnọdụ obi ụtọ na udo, chịkọtara ọrụ nke afọ gara aga, chọpụta adịghị ike, 2019 na-agbasi mbọ ike, mepụta amamiihe!